Tonga dia Lasa i Lalao Ravalomanana | Hevitra MPANOHARIANA |
Tonga dia Lasa i Lalao Ravalomanana
2012-07-27 @ 23:16 in Politika
Tonga tao am-piasana androany folakandro. Manao ny asa mahazatra sy andavanandro. Indro nisy "namana" iray tonga avy any dia niresaka hoe malaza amin'ny aterineto any fa nigadona eto an-tanindrazana Lalao Ravalomanana. Gaga dia gaga nahare izany, jereo fa mandeha any amin'ny facebook any, hoy izy. Tsy nieritreritra ny hanokatra tany raha tsy nisy izay teny izay hanamarina.
Dia indro tokoa fa misy olona vitsivitsy manoratra ny fahatongavany... zendana tanteraka, velona ny eritreritra tao anaty tao: Nisy ihany ve ny fifanarahana fa natao tsy an-kiteniteny? Tena henjana sy tsy ampoizina raha izany tokoa! Nanao ahoana tokoa izany ny fandehan'ny resaka tao Seychelles tao? Raha tsy resaka mangina tokoa, araka ny hevitra nitsiry tao anatiko tao, tsy ahavitana ny tahaka izao. Samy manana ny heviny any ny tsirairay... fa tsy nampino ny fahatongavany teto an-toerana sy ny nahafahany nanitsaka ny tanin'i Madagasikara indray. Miteraka tsirim-panantenana goavana. Nalefa ny hafatra ary dia niraradraraka ny fiarahabana tonga soa. Saingy tsy nifarana ny tantara...
Tsy hita tsara izay tena hevitra, ahoana no atao amin'ity olona ity? Hogadraina ve sa averina tany amin'izay niaviany? Sa ampidirina tsotra toy ny olon-drehetra? Aleo alefa amin'ny fiaramanidina voalohany mivoaka an'i Madagasikara e! Mankaiza? mankany Bangkok, aleo faizina any amin'ny tany tsy fantatra sy tsy misy mahafantatra any. Izay mihitsy anaovana azy. Amin'izay fay tsy mitonantonana aty Madagasikara aty intsony.
Dia inona ny antony androahana azy? Tsy voaresaka ao anatin'ny tondrozotra ny fiverenany. Mampiasa anarana diso izy dia ny anarany fony mbola tsy nanambady izany. Manao hosoka ny anarany sy mampiasa hosoka ny anarany anie tokony hogadraina fa tsy horoahina kosa e. Tsy hay aloha fa dia izay no zava-misy e! Tonga izy izany fa tsy nahazo niditra. Nalefa tany an-dakira... Misy tetika politika henjana dia henjana kosa ao anatin'izany rehetra izany an! samy be fitetika daholo. Dia ho hita eo ny manaraka hoe hatraiza no iafaran'ity resaka ity.
Tsikaritra fotsiny fa 27 volana Faha-07 taona 2012 no andro niseranany teto Madagasikara ankoatra ny 7 roa sy ny 0 roa ny fitambaran'ny isa 2 amin'ny datin'andro (27) sy ny 2+1+2 amin'ny taona (2012) manome isa 7. Sao mbola misy manandro na mampiasa isa amin'ny andro indray ary any ho any?
Jentilisa 28 jolay 2012